Madaxda Soomaaliya oo Heshiis Ka Gaarey Khilaafka Khaliijka
Madaxda Soomaaliya oo Heshiis Ka Gaartey Khilaafka Khaliijka
Madaxweynaha Soomaaliya oo shir-gudoominaya kulankii Muqdisho- Sawirka Villa Somalia
MUQDISHO, Soomaaliya - Kadib markii uu soo dhamaadey maanta kulan u dhexeeyey madaxda dowlada Soomaaliya iyo dowlada xubnaha ka ah Federaalka ayaa waxaa heshiis dadban laga gaarey khilaafkii siyaasdeed ee ka dhashey muranka u dhexeeya dowladaha Khaliijka.
Madaxda dowlada iyo maamulada oo muddo 8 cisho ah shir uga socdey ayaa qoraal ay soo wada-saareen qodobkiisa 1aad ka dhigey in hesishiis siyaasadeed lagu gaarey qodobadaan:
Qodobka Kowaad ee Heshiiskaan xubintiisa 4aad ayaa waxaa madaxda dowlada isla-garteen in mas'uuliyada Dastuuriga ah ee la kala leeyahay iyo kuwa wadaaga ah la ixtiraamo taasoo macnaheeda ka dhigeysa in la isku afgartey in qdobka 53aad ee axdiga KMG ah iyo qodobka 54aad la aqoonsadey jiritaankooda.
Qodobka 54aad iyo 53aad ayaa labadabuba Dastuurka KMG ah waxaa awooda uu siinayaa dowlada Federaalka iyo maamulada marka laga hadlayo heshiisyada la xiriira arimaha dibada kaasoo qolo walbka u cuskaneysay go'aamadii ay ka-kala qaateen khilaafka u dhexeeya wadamada Khaliijka.
Heshiiskaan toos uma laguma xusin wadamada Khaliijka balse sida warsidaha Garowe Online fahansan yahay madaxda Soomaalida ayaa go'aansatey in aan magac ahaan la xusin balse la soo hadal qaado xalinta go'aamada keeney khilaafkaan.
Dhinaca kale heshisika guud ayaa sida qodobadiisa ka muuqda waxay si toos ah u taabanayaan xal gaarista khilaafyada hareeyey in hay'adaha dowliga dalka wada shaqeeyaan iyo in la helo dhisme ciidan Soomaaliyeed oo ka qayb qaata difaaca dalka. Halkaan Ka Akhri
Dadka la socda siyaasada Soomaaliya oo warsidaha Garowe online la hadley ayaa sheegey in hadii lagu guuleysto fulinta qodobadaan ay noqon karaan kuwo saldhig u ah dib u dhisada qaranka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Galmudug oo ka dagay Muqdisho [Sawirro]
Soomaliya 28.10.2017. 11:11